Cudurka Mers oo dad hor leh ku diley Kuuriyada Koonfureed – Bosaso Times News
Cudurka Mers oo dad hor leh ku diley Kuuriyada Koonfureed
admin June 10, 2015 Cudurka Mers oo dad hor leh ku diley Kuuriyada Koonfureed2015-06-10T13:45:22+00:00 Health No Comment
Welwelka laga qabo cudurka Mers ayaa si weyn ugu xoogeystey dalka Kuuriyada Koonfureed kadib markii dadka u geeriyooday cudurkaas ay gaareen 9 qof tan iyo bishii hore ee Maajo.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-Hye ayaa dib u dhigtay booqasho uu ku tegi lahayd dalka Maraykanka, Dadka Kuuriyada Koonfureed ayaana loogu baaqey in ay guryahooda jogaan.
Waxaa hoos u dhacay wax iibsiga caadiga ah ee dalkaas iyo dukaameysiga,kadib markii dukaamadu waayeen macaamiil u soo gasha, waxaana kor u kacay wax ka iibsiga Dukaamada Online ka ah ee Internetka keliya wax ku gada.
Waxaa xiran Iskoolo ka badan 1000 kuwaas oo la faaxay ardeydii dhiganeysey cudurka Mers dartiis, waxaana ilaa hadda la karantiiley dad ku dhaw 3000 oo qof oo looga shakisan yahay cudurkaas, ilaa hadda waxaa Isbitaalada lagu daweynayaa dad ka badan 100 qof oo si toos ah cudurka u qaba.
Cudurka Mers ee ka dilaacey dalka Kuuriyada Konfureed, ayaa noqonayaa dalkii labaad ee ugu badnaa ee saameeyo kadib Sucuudi Caraabiya.
Qofkii u horeeyey ee u geeriyooda cudurka Mers gudaha Kuuriyada Koonfureed ayaa la sheegey in uu safar ku tegey dalka dalka Sucuudiga halkaas oo loo malaynaayo in uu ka soo qaadey.
Cudurka Mers ayaa la aminsan yahay in uu ka yimid xoolaha, waxana uu la bahyahay cudurkii Sars la dhihi jirey ee dunida ka dilacay sanadkii 2003, waxaana uu haleelaa caabuqa.
http://www.bosasotimes.com/cudurka-mers-oo-dad-hor-leh-ku-diley-kuuriyada-koonfureed/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2015/06/mers1-740x416.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2015/06/mers1-740x416-150x150.jpg 2015-06-10T13:45:22+00:00 adminHealthWelwelka laga qabo cudurka Mers ayaa si weyn ugu xoogeystey dalka Kuuriyada Koonfureed kadib markii dadka u geeriyooday cudurkaas ay gaareen 9 qof tan iyo bishii hore ee Maajo. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-Hye ayaa dib u dhigtay booqasho uu ku tegi lahayd dalka Maraykanka, Dadka Kuuriyada Koonfureed ayaana loogu...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
« Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. Camey oo la kulmay agaasimayaasha Wasaaradaha Puntland ee xiriirka la leh Barnaamijka JPLG
FARMAAJO: Dowladda hadda Jirta Waxay ahayd in ay Muhiimadda siiso ammaanka »